Hoy ny Baiboly hoe, “Koa noho izany ny finoana dia avy amin’ny fandresena, ary ny fanendresana avy amin’ny tenin’Andriamanitra.” (Romana 10:17). Araky ny ihainoanareo betsaka ny Teny, arak’izany koa no hahazoanareo finoana betsaka. Ireto toriteny manaraka ireto dia ampahany kely iray amin’ireo an-jatony izay efa vonona anananay.
Nanomboka teo amin’ireo havoanan’i Kentucky izany rehetra izany. Vao zazalahy iray fotsiny izy rehefa nandositra ny lalàna ny rainy ary namindra ny fianakaviany nankany Jeffersonville, Indiana. Mitantara ny amin’ireo fahitany voalohany izy sy hoe ahoana no nitenenan’ny Tompo taminy mba hiaina fiainana iray madio. Nanambady ny malalan’ny fony izy ary nifaly tamin’ny fiainan-tsambatra iray raha mbola mpitoriteny tanora iray niaraka tamin’ny asa mafy sy zanaka anankiroa, saingy avy eo dia nidona ny loza. Tsy ho tahaka anareo taloha intsony ianareo rehefa avy mihaino ny Rev. William Branham mitantara ny tantaram-piainany.
Nahoana Isika No Tsy Anaram-piangonana?
Nampianatra antsika ilay tontolom-pivavahana moderina fa ny hoe Kristiana dia ny mikambana amin’ny fiangonana iray. Raha ny tena misy, dia ireo anaram-piangonana no mampisaraka ny olona ao anatin’ny sekta sy fombam-pivavahana samihafa, ary manao antsika hifanohitra. Ao amin’i Kristy irery ihany no mety ahitana ny famonjena; tsy mety ho hita amin’ny alàlan’ny maha-lasa mambran’anaram-piangonana iray fotsiny izany. Nosolointsika “Kristiana” fanekem-pinoana sy dogma ve ny firaisana manokana amin’i Jesosy Kristy Tompo? Fotoana hiverenana amin’ny Baiboly izao.
Ny Taranaky Ny Menarana
Inty no heverin’ny olona maro fa nitranga tao amin’ny Sahan’i Edena: Niteny amin’i Adama sy Eva Andriamanitra mba tsy hihinana voankazo anankiray. Ny menarana no “namitaka” an’i Eva mba hihinana an’ilay voankazo. Avy eo dia nomen’i Eva an’i Adama izany, ary nanao tahaka an’izany koa izy, izay nahatonga azy ireo hahafantatra fa nitanjaka izy ireo ary nitarika tao amin’ny fahalavoan’ny taranak’olombelona. Ireo fanontaniana mazava dia hoe: karazana menarana inona no afaka miresaka, nahoana ny fihinanana voankazo no nampisokatra ny mason’izy ireo tamin’ny fitanjahany, ary nahoana izy ireo no nahazo zanaka avy hatrany taorian’io? Tsotra ny valiny, ary ity toriteny ity no manazava an’izany.
Manàna Antoka An’Andriamanitra
Azoko antoka fa miresaka amin’ny olona aho izao maraina izao izay tonga eo amin’io toerana io. Efa teo amin’izany imbetsaka ny tenako. Rehefa niverina aho ka nanamarika ny fiainako ary namadibadika ny vato tsirairay, ka nahita fa nanao zavatra ratsy aho, dia nandeha aho nifona an’izany ka nanao hoe, “Tompo Andriamanitra, hahitsiko izany,” ary nataoko izany. Avy eo aho dia miverina indray ka manao hoe, “Ankehitriny, Tompo, Andriamanitra Ianao; hamaly ahy Ianao. Azo antoka fa nahatanteraka ny fitakiana tsirairay Notakianao tamiko mba hatao aho. Ary ny fitakiana tsirairay, notanterahiko izany.” Fa mbola tsy hihetsika foana Izy, toy ny hoe mijanona mangina; eo amin’izany no tokony hanananareo antoka fa Andriamanitra Izy. Aza kivy…
Tamin’Io Andro Teo Kalvary Io
Roa arivo taona lasa izay, no nanomezan’i Jesosy Kristy ny Ainy ho an’ny olombelona rehetra izay hany nandeha teto amin’ny planeta Tany. Nidika inona tamin’ny tsirairay avy amintsika io andro teo Kalvary io? Izany dia nanome antsika rehetra ny fanararaotra hahazo ny Fiainana Mandrakizay. Raha maniry mafy ny hanana firaisana manokana amin’ny Mpamonjinareo ny fonareo, amin’izay fotoana izay dia ity no toerana tsara hanombohana.
Ahoana No Nahatongavan’ilay Anjely Teo Amiko
Ny fanirahana an’i William Branham avy tamin’Andriamanitra no nampiredareda ny fifohazan’ny fanasitranana naneran-tany tamin’ny faramparan’ny 1940 sy 1950. Ireo evanjelista toa an’i Oral Roberts, T.L. Osborne, ary Jack Coe dia nanaraka ny diany ary nanova ny endriky ny tontolo Kristiana. Tahaka an’izany no nanombohan’izy rehetra.
TORITENY MARO EFA VONONA